Home General Knowledge အခြားသူတွေကို မပြောပြသင့်တဲ့ သင့်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လှို့ဝှက်ချက် (၇) ချက်
လူတိုင်းဟာ မကောင်းတဲ့အမူအကျင့် တချို့ကို သတိမထားမိပဲ လုပ်တတ်ကြတာ သဘာဝလိုပါပဲ။ ဒီလိုသတိမထားမိတဲ့ ကိစ္စဟာ လူစိမ်းတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ personal မှတ်စုစာအုပ်ကို ဖွင့်ပြမိသလို ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ ဘ၀ဆိုဆိုတာ နက်နဲတဲ့အရာ ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ကျိန်းသေသတိထား ရမယ့်ကိစ္စလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း မရှိနိုင်တဲ့နိုင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့လှို့ဝှက်ချက်တွေကို ပြောပြမိတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ချည်မိတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းလို ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဘဝရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို အခြားသူတွေ မသိရင် သင့်ကိုထိခိုက်စရာတွေ ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ လှို့ဝှက်ထားသင့်တဲ့ ကိစ္စတွေကို သတိထားမိစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အတိတ်က မကျေနပ်မှုတွေ
ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ မကောင်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဘဝအတွေ့အကြုံတွေ ကိုယ်စီရှိကြပြီး ဒီလိုအရာတွေကို အခြားသူတွေအား ပြောမပြချင်ကြပါဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကျောင်းသားဘဝ သို့မဟုတ် အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတိတ်က မကျေနပ်မှု ဖြစ်ခဲ့သူတွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအရာတွေကို သင့်အနေနဲ့ ဘာကြောင့်ဆုပ်ကိုင်ထားဖို့ လိုအပ်တာလဲ? ဟိုးအရင်တုန်ုးက မုန်းတီးမှုစံချိန်အတိုင်း ယခုအချိန်မှာရောမုန်းတီးနိုင်သေးရဲ့လား? ဒီလိုအတိတ်က မကျေနပ်မှုတွေကို အခြားသူတွေအား ပြောပြမိတဲ့အခါ သင့်ကိုသူတို့က အာဃာတတရား ကြီးမားသူ၊ စိတ်ကောင်းမရှိဖြစ်ကြောင်း ထင်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်မကျေနပ်သူနဲ့ သူတို့တွေ တနည်းတဖုံ ပတ်သတ်မှု ရှိရင်လည်း သင့်အတွက် မကောင်းပါဘူး။ ဒီလိုမပြောမိဖို့သာမဟုတ်ပဲ ယခုလိုစကားမျိုးတွေ အခြားသူတွေ ပြောလာရင်လည်း အာရုံစိုက်စရာ မလိုကြောင်း သတိရပါ။ လူတိုင်းဟာ အကောင်းမြင်တဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေကို ပိုပြီးသဘောကျကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်ကိုပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ပြောဆိုတာဟာ လူတွေသင့်ကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာတာ တွေ့ရမှာပါ။
ဘ၀ထဲက အချို့အရာတွေဟာ သူတို့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပိုပြီးအရေးကြီးကြောင်း ကျွန်တော်တို့အားလုံး သိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်ထားတဲ့ ကားအသစ်၊ ဖုန်းအသစ်ကို ကြွားဝါချင်စိတ်လေးတော့ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ကလေးကို ဖြေဖျောက်ဖို့အတွက် အခြားသူတွေအား ရင်ဖွင့်မိတဲ့အခါ သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေက သင့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြေဖျောက်ဖို့အတွက် ကုစားမှုဆိုတာကို မသိချင်ပါဘူး။ ဒီအစား သင်ဟာ အကြွားသန်သူတစ်ယောက်၊ သို့မဟုတ် ဖင်ခေါင်းကျယ်သူတစ်ယောက် သို့မဟုတ် ပစ္စည်းတွေကိုစွဲလမ်းရူးသွပ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ကြောင်း ထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်။
ရိုးရိုးကုပ်ကုပ်နေခြင်းဟာ အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အနာဂတ်အတွက် ပန်းတိုင်များ
ဒါကိုတော့ သင်လက်ခံချင်မှ လက်ခံပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ရေရှည်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့ဆိုရင် အခြားသူတွေကို မမျှဝေသင့်ကြောင်း သိပ္ပံပညာက ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ သင့်အနာဂတ်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အခြားသူတွေအား ကြိုပြီးပြောထားတဲ့အခါ တကယ်လို့ အောင်မြင်မှုတွေ ဆွတ်ခူးရင်တောင်မှ ပျော်ရွင်မှုတွေ သင့်အတွက်သိပ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မအောင်မြင်ဖူးဆိုရင်တော့ ပိုဆိုးပါတယ်။ ရလာဒ်ကတော့ အောင်မြင်မြင်၊ မအောင်မြင်မြင် ရှေ့ကိုပိုကြိုးစားပြီး လုပ်ဆောင်ဖို့ သင်ပျက်ကွက်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ပန်းတိုင်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့အခါ အဆိုပါအရာတွေကို ဆွတ်ခူးဖို့ သင့်မှာ အခွင့်အရေး မြင့်မြင့် ပိုရှိလေပါပဲ။ သင်ရရှိပြီဆိုရင်တော့ လွတ်လပ်စွာနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို သင်ပြောပြလို့ ရပါပြီ။
သင့်ရဲ့ဝင်ငွေအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောသင့်တဲ့ လူတစ်စုရှိပါတယ်။ သူတို့ကသင့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ သင့်လက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေပါ။ ပိုက်ဆံအကြောင်းဟာ public မှာသိပ်ပြောလို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတိုင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေက ဘယ်လိုဆိုတာ သင်မသိနိုင်ပါဘူး။ သူများတွေ မေးလာတဲ့ အခါမှာလည်း ပြောသင့်မှပြောပါ။ မမေးပဲပြောတာဆိုရင်တော့ အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ကြွားဝါတတ်သူနဲ့ တူနေပါလိမ့်မယ်။ ငွေရေးကြေးရေးက ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ အားလုံးကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ဝင်ငွေအကြောင်း public မှာပြောမိတဲ့အခါ လူတွေကသင့်ဆီက အကူအညီနဲ့ ရလိုမှုတွေ ရှိတဲ့အခါ သင့်ကိုပဲ ထိပ်ဆုံးကစဉ်းစားလာကြပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအလှူငွေကောက်တဲ့အခါလို ပိုက်ဆံချေးတဲ့အခါလိုတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ့်သင် ယခုလိုအဆင်မပြေဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကနေ ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ ဘဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို လုံးဝဖွင့်မပြောမိပါစေနဲ့။
အကျင့်ကောင်းရင် ကံကောင်းတယ်ဆိုတာ သင်ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ အမှန်တရားဖြစ်ပြီးတော့ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကောင်းတဲ့အကျင့်ကို ထာဝရမွေးမြူသင့်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို သင်ကစပြီး ကြွားဝါခဲ့ရင်တော့ ရှုထောင့်တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုတစ်ခုကို အခြားသူတစ်ယောက်အား ကြွားဝါမိတဲ့အခါ သင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ကောင်းမှုလေးက အလိုလိုပျက်ပြယ်သွားတတ်ပါတယ်။ လူအတော်များများကတော့ ကောင်းမှုလုပ်တာထက် နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်ကြတာ များပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က အကြီးမြတ်ဆုံး ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေဟာ အမည်မသိ(စေတနာရှင်တစ်ဦး) ဖြစ်နေရခြင်းဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပါပဲ။ ပရဟိတမှာ ရလိုမှု မရှိပါဘူး။ သင်ကအခြားသူတစ်ယောက်ကို လှူတန်းတဲ့အခါ သူ့ကိုကူညီပေးရုံသက်သက်သာဖြစ်ပြီး သင်နာမည်ကြီးဖို့(သင့်အတွက်) မဟုတ်ကြောင်း သတိရပါစေ။
လူတိုင်းဟာ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေ၊ နေရာတွေကနေ ဥာဏ်အလင်းရဖို့ ရှာဖွေနေတတ်ပါတယ်။ အချို့က ဘာသာရေးကနေရှာဖွေကြပြီး၊ အချို့ကအားကစားပွဲတွေကနေ ကြိုတင်သိမြင်မှု ဥာဏ်အလင်းကို ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပဲဖြစ်ပြီး အခြားသူတွေကို တွန်းအားမပေးပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကနေ ရတဲ့ဥာဏ်အလင်းဆိုတာဟာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင် ပြနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်သလို ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ အရာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အခြားသူတွေက စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုလျှောက်ပြောနေရင်တော့ လမ်းပေါ်မှာ မိုက်တလုံးနဲ့ လိုက်လံဟောပြောနေတဲ့သူနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ထိုသူတွေရဲ့ကစကားကို ဘယ်တစ်ယောက်က မကြာခဏ ဂရုစိုက်နားထောင်ဖူးလို့လဲ။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ နာမည်ကြီးပြီး လူယုံကြည်မှုများလို့ ခြွင်းချက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ သွေးရင်းအမျိုးတွေရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တွေကို မိသားစုအတွင်းမှာပဲ ထားခြင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစား မလုပ်သင့်ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အမျိုးတွေကို ဒီလှို့ဝှက်ချက်တွေ မျှဝေရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အမျိုးအချင်းချင်း ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ အမျိုးအချင်းချင်းကြားမှာပဲ ရှိနေပါစေ။ သင့်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ဒီလှို့ဝှက်ချက်တွေ ပျံ့နှံ့ခွင့် မရှိပါဘူး။ သူတို့က သင့်ကိုယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီယုံကြည်မှုကို ချိုးဖောက်တာလောက် ဆိုးတဲ့အ၇ာ မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အခြားသူတွေရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တွေကို စောင့်ရှောက်ပေးပါ။ သူတို့ကလည်း သင့်ရဲ့လှို့ဝှက်ချက်တွေကို
အခွားသူတှကေို မပွောပွသငျ့တဲ့ သငျ့ရဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးကိစ်စနဲ့ ပတျသတျတဲ့ လှို့ဝှကျခကျြ (၇) ခကျြ
လူတိုငျးဟာ မကောငျးတဲ့အမူအကငျြ့ တခြို့ကို သတိမထားမိပဲ လုပျတတျကွတာ သဘာဝလိုပါပဲ။ ဒီလိုသတိမထားမိတဲ့ ကိစ်စဟာ လူစိမျးတှကေို ကိုယျ့ရဲ့ personal မှတျစုစာအုပျကို ဖှငျ့ပွမိသလို ဖွဈသှားတတျပါတယျ။ စိတျဝငျစားကောငျးတဲ့ ဘဝဆိုဆိုတာ နကျနဲတဲ့အရာ ဖွဈတာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့တှေ ကြိနျးသသေတိထား ရမယျ့ကိစ်စလညျး ဖွဈပါတယျ။ လူတိုငျးဟာ ရညျရှယျခကျြကောငျး မရှိနိုငျတဲ့နိုငျတဲ့အတှကျ သငျ့ရဲ့လှို့ဝှကျခကျြတှကေို ပွောပွမိတာဟာ ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျခညျြမိတဲ့ ကွိုးတဈခြောငျးလို ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ သငျ့ဘဝရဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေးအသေးစိတျ အခကျြအလကျတှကေို အခွားသူတှေ မသိရငျ သငျ့ကိုထိခိုကျစရာတှေ ဖွဈအောငျ ပွုလုပျနိုငျကွမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ သငျ့အနနေဲ့ လှို့ဝှကျထားသငျ့တဲ့ ကိစ်စတှကေို သတိထားမိစဖေို့ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁။ အတိတျက မကနြေပျမှုတှေ
ကြှနျတျောတို့အားလုံးမှာ မကောငျးတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျရေး ဘဝအတှအေ့ကွုံတှေ ကိုယျစီရှိကွပွီး ဒီလိုအရာတှကေို အခွားသူတှအေား ပွောမပွခငျြကွပါဘူး။ လူတိုငျးမှာ ကြောငျးသားဘဝ သို့မဟုတျ အလုပျနဲ့ပတျသတျပွီး အတိတျက မကနြေပျမှု ဖွဈခဲ့သူတှေ ရှိကောငျးရှိနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုအရာတှကေို သငျ့အနနေဲ့ ဘာကွောငျ့ဆုပျကိုငျထားဖို့ လိုအပျတာလဲ? ဟိုးအရငျတုနျုးက မုနျးတီးမှုစံခြိနျအတိုငျး ယခုအခြိနျမှာရောမုနျးတီးနိုငျသေးရဲ့လား? ဒီလိုအတိတျက မကနြေပျမှုတှကေို အခွားသူတှအေား ပွောပွမိတဲ့အခါ သငျ့ကိုသူတို့က အာဃာတတရား ကွီးမားသူ၊ စိတျကောငျးမရှိဖွဈကွောငျး ထငျမှတျနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ သငျမကနြေပျသူနဲ့ သူတို့တှေ တနညျးတဖုံ ပတျသတျမှု ရှိရငျလညျး သငျ့အတှကျ မကောငျးပါဘူး။ ဒီလိုမပွောမိဖို့သာမဟုတျပဲ ယခုလိုစကားမြိုးတှေ အခွားသူတှေ ပွောလာရငျလညျး အာရုံစိုကျစရာ မလိုကွောငျး သတိရပါ။ လူတိုငျးဟာ အကောငျးမွငျတဲ့ ပွောဆိုဆကျဆံမှုတှကေို ပိုပွီးသဘောကကြွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပစ်စုပ်ပနျကိုပဲ အာရုံစိုကျပွီး ပွောဆိုတာဟာ လူတှသေငျ့ကို ပိုပွီးစိတျဝငျစားလာတာ တှရေ့မှာပါ။
ဘဝထဲက အခြို့အရာတှဟော သူတို့ရဲ့ကုနျကစြရိတျထကျ ပိုပွီးအရေးကွီးကွောငျး ကြှနျတျောတို့အားလုံး သိပွီးသားပါ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတဈလမှော ကြှနျတျောတို့တှေ စြေးကွီးပေးပွီး ဝယျထားတဲ့ ကားအသဈ၊ ဖုနျးအသဈကို ကွှားဝါခငျြစိတျလေးတော့ ဖွဈတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုစိတျကလေးကို ဖွဖြေောကျဖို့အတှကျ အခွားသူတှအေား ရငျဖှငျ့မိတဲ့အခါ သငျ့ရဲ့မိတျဆှကေ သငျ့ရဲ့စိတျဆန်ဒဖွဖြေောကျဖို့အတှကျ ကုစားမှုဆိုတာကို မသိခငျြပါဘူး။ ဒီအစား သငျဟာ အကွှားသနျသူတဈယောကျ၊ သို့မဟုတျ ဖငျခေါငျးကယျြသူတဈယောကျ သို့မဟုတျ ပစ်စညျးတှကေိုစှဲလမျးရူးသှပျသူတဈယောကျ ဖွဈကွောငျး ထငျကောငျးထငျကွပါလိမျ့မယျ။
ရိုးရိုးကုပျကုပျနခွေငျးဟာ အံ့ဖှယျကောငျးတဲ့ စိတျဝငျစားစရာ ဖွဈပါတယျ။
၃။ အနာဂတျအတှကျ ပနျးတိုငျမြား
ဒါကိုတော့ သငျလကျခံခငျြမှ လကျခံပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ရရှေညျပနျးတိုငျကို ရောကျရှိဖို့ဆိုရငျ အခွားသူတှကေို မမြှဝသေငျ့ကွောငျး သိပ်ပံပညာက ဖျောထုတျထားပါတယျ။ သငျ့အနာဂတျရဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို အခွားသူတှအေား ကွိုပွီးပွောထားတဲ့အခါ တကယျလို့ အောငျမွငျမှုတှေ ဆှတျခူးရငျတောငျမှ ပြျောရှငျမှုတှေ သငျ့အတှကျသိပျရှိမှာ မဟုတျပါဘူး။ မအောငျမွငျဖူးဆိုရငျတော့ ပိုဆိုးပါတယျ။ ရလာဒျကတော့ အောငျမွငျမွငျ၊ မအောငျမွငျမွငျ ရှကေို့ပိုကွိုးစားပွီး လုပျဆောငျဖို့ သငျပကျြကှကျပါလိမျ့မယျ။ တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ပနျးတိုငျကို သငျကိုယျတိုငျထိနျးသိမျးထားတဲ့အခါ အဆိုပါအရာတှကေို ဆှတျခူးဖို့ သငျ့မှာ အခှငျ့အရေး မွငျ့မွငျ့ ပိုရှိလပေါပဲ။ သငျရရှိပွီဆိုရငျတော့ လှတျလပျစှာနဲ့ တဈကမ်ဘာလုံးကို သငျပွောပွလို့ ရပါပွီ။
သငျ့ရဲ့ဝငျငှအေကွောငျးကိုဖှငျ့ပွောသငျ့တဲ့ လူတဈစုရှိပါတယျ။ သူတို့ကသငျ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ သငျ့လကျအောကျမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ သူတှပေါ။ ပိုကျဆံအကွောငျးဟာ public မှာသိပျပွောလို့ကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုလညျး မဟုတျပါဘူး။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လူတိုငျးရဲ့ ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနကေ ဘယျလိုဆိုတာ သငျမသိနိုငျပါဘူး။ သူမြားတှေ မေးလာတဲ့ အခါမှာလညျး ပွောသငျ့မှပွောပါ။ မမေးပဲပွောတာဆိုရငျတော့ အကွောငျးပွခကျြမရှိပဲ ကွှားဝါတတျသူနဲ့ တူနပေါလိမျ့မယျ။ ငှရေေးကွေးရေးက ဆကျဆံရေးအခွအေနေ အားလုံးကို ပွောငျးလဲနိုငျစှမျး ရှိပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့ရဲ့ဝငျငှအေကွောငျး public မှာပွောမိတဲ့အခါ လူတှကေသငျ့ဆီက အကူအညီနဲ့ ရလိုမှုတှေ ရှိတဲ့အခါ သငျ့ကိုပဲ ထိပျဆုံးကစဉျးစားလာကွပါလိမျ့မယျ။ ဥပမာအလှူငှကေောကျတဲ့အခါလို ပိုကျဆံခြေးတဲ့အခါလိုတှမှော ဖွဈပါတယျ။ သငျ့ကိုယျ့သငျ ယခုလိုအဆငျမပွဖွေဈနိုငျတဲ့ အခွအေနမြေိုးကနေ ကယျတငျဖို့ကွိုးစားပါ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ဝငျငှနေဲ့ ဘဏျနဲ့ဆိုငျတဲ့ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို လုံးဝဖှငျ့မပွောမိပါစနေဲ့။
အကငျြ့ကောငျးရငျ ကံကောငျးတယျဆိုတာ သငျကွားဖူးပါလိမျ့မယျ။ ဒါဟာ အမှနျတရားဖွဈပွီးတော့ ကောငျးတဲ့အလုပျတှေ လုပျနိုငျဖို့အတှကျ ကောငျးတဲ့အကငျြ့ကို ထာဝရမှေးမွူသငျ့ပါတယျ။ ဒီအကွောငျးကို သငျကစပွီး ကွှားဝါခဲ့ရငျတော့ ရှုထောငျ့တဈခုလုံးကို ပွောငျးလဲသှားနိုငျပါတယျ။ သငျလုပျခဲ့တဲ့ ကောငျးမှုတဈခုကို အခွားသူတဈယောကျအား ကွှားဝါမိတဲ့အခါ သငျဖနျတီးခဲ့တဲ့ ကောငျးမှုလေးက အလိုလိုပကျြပွယျသှားတတျပါတယျ။ လူအတျောမြားမြားကတော့ ကောငျးမှုလုပျတာထကျ နာမညျကွီးခငျြလို့ လုပျကွတာ မြားပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါက အကွီးမွတျဆုံး ပရဟိတလုပျငနျးတှဟော အမညျမသိ(စတေနာရှငျတဈဦး) ဖွဈနရေခွငျးဟာ သိပျကောငျးတဲ့ အကွောငျးပွခကျြပါပဲ။ ပရဟိတမှာ ရလိုမှု မရှိပါဘူး။ သငျကအခွားသူတဈယောကျကို လှူတနျးတဲ့အခါ သူ့ကိုကူညီပေးရုံသကျသကျသာဖွဈပွီး သငျနာမညျကွီးဖို့(သငျ့အတှကျ) မဟုတျကွောငျး သတိရပါစေ။
လူတိုငျးဟာ မတူညီတဲ့ အခွအေနတှေေ၊ နရောတှကေနေ ဉာဏျအလငျးရဖို့ ရှာဖှနေတေတျပါတယျ။ အခြို့က ဘာသာရေးကနရှောဖှကွေပွီး၊ အခြို့ကအားကစားပှဲတှကေနေ ကွိုတငျသိမွငျမှု ဉာဏျအလငျးကို ရှာဖှနေကွေပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဒါဟာ သငျ့ရဲ့ရှေးခယျြမှုပဲဖွဈပွီး အခွားသူတှကေို တှနျးအားမပေးပါနဲ့။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သငျရဲ့ရှေးခယျြမှုကနေ ရတဲ့ဉာဏျအလငျးဆိုတာဟာ လကျဆုပျလကျကိုငျ ပွနိုငျတဲ့အရာမဟုတျသလို ဘယျလောကျကောငျးတဲ့ အရာဖွဈကွောငျးကိုလညျး အခွားသူတှကေ စိတျဝငျစားမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုလြှောကျပွောနရေငျတော့ လမျးပျေါမှာ မိုကျတလုံးနဲ့ လိုကျလံဟောပွောနတေဲ့သူနဲ့ အတူတူပဲ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ ထိုသူတှရေဲ့ကစကားကို ဘယျတဈယောကျက မကွာခဏ ဂရုစိုကျနားထောငျဖူးလို့လဲ။ ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျတှကေတော့ နာမညျကွီးပွီး လူယုံကွညျမှုမြားလို့ ခွှငျးခကျြလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
သငျ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ သှေးရငျးအမြိုးတှရေဲ့ လှို့ဝှကျခကျြတှကေို မိသားစုအတှငျးမှာပဲ ထားခွငျးဟာ ကောငျးမှနျတဲ့အရာဖွဈပါတယျ။ အခွားသူတှရေဲ့ ယုံကွညျမှုကို အလှဲသုံးစား မလုပျသငျ့ပါဘူး။ သငျ့ရဲ့အမြိုးတှကေို ဒီလှို့ဝှကျခကျြတှေ မြှဝရေငျ ပွဿနာမရှိပါဘူး။ အမြိုးအခငျြးခငျြး ဖွဈတဲ့ပွဿနာ အမြိုးအခငျြးခငျြးကွားမှာပဲ ရှိနပေါစေ။ သငျ့နဲ့ပတျသတျတဲ့ လူမှုပတျဝနျးကငျြမှာတော့ ဒီလှို့ဝှကျခကျြတှေ ပြံ့နှံ့ခှငျ့ မရှိပါဘူး။ သူတို့က သငျ့ကိုယုံကွညျပါတယျ။ ဒီယုံကွညျမှုကို ခြိုးဖောကျတာလောကျ ဆိုးတဲ့အရာ မရှိပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ အခွားသူတှရေဲ့ လှို့ဝှကျခကျြတှကေို စောငျ့ရှောကျပေးပါ။ သူတို့ကလညျး သငျ့ရဲ့လှို့ဝှကျခကျြတှကေို
Previous articleအမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ အဝတ်ဗီဒိုထဲမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ အဝတ်အစား ၈မျိုး
Next articleအိမ်ထောင်ကျပြီး အနာဂတ်မှာ အလားအလာကောင်းဖို့အတွက် အကြံပြုချက်